Ozil oo Baxar ku jira….(Sababta dhabta ah ee looga reebay Safka Arsenal oo la Ogaaday) – Gool FM
Ozil oo Baxar ku jira….(Sababta dhabta ah ee looga reebay Safka Arsenal oo la Ogaaday)
(London) 27 Nof 2018. Mesut Ozil ayaa keydka la dhigay kulankii dhawaa ay Arsenal ka adkaatay Bournemouth kaaga sii daranee xitaa la ma soo galin.
30-jirka ayaa lagu soo bilaabay 10-kulan oo Premier League kal ciyaareedkan balse Unai Emery ayaa go’aansaday inuu keydka dhigo xiddiga reer Germany isla markaana uusan soo galin ciyaartii ay 2-1 uga adkaadeen Bournemouth axadii.
Mar ciyaarta kaddib la waydiiyay sababta uu safka uga reebay Ozil ayuu Emery sheegay in ciyaaryahan kasta uu muhiim yahay sidaa darteed uu qaatay go’aanka inuusan safin maadaama uu kulanku ahaa mid xoog ku dhisan.
Laakin Daily Mirror ayaa iminka warineysa in sheekadu ay sidaa ahayn isla markaana Ozil keydka lagu cabay maadaama uu tababaraha ka niyad jabay uu ka carooday bandhigiisa kulankii ay bar-baraha 2-2 la galeen Crystal Palace.
Waxay wararku intaa ku darayaan in Ozil uu hadda kaddib wajihi karo suuro galnimada inuu waqti badan ka soo muuqdo keydka Gunners, maadaama macalinka cusub ee kooxda Emery uu yahay mid shaqo adag ka doonaya mid kasta oo ka mid ah ciyaartoydiisa.
Kubbad qaabeeyaha waa kan ugu mushaarka badan Arsenal 350,000 oo bound usbuuciiba balse midaa uma damaanad qaadeyso inuu hadda kaddib boos joogta ah ka helo kooxda.
Daily Mail ayaa warka ku dareysa in Emery uu qorsheynayo inuu kulamo badan keydka ku cabo Ozil si uu u dareemo in loo baahan yahay ciyaar ku dhisan dadaal Iyo xoog.
War u Wanaagsan Taagerayaasha Arsenal kaddib Laurent Koscielny oo markii u horreeyay cayaaray tan iyo Bishii May